स्वास्थ्य – Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५१७:२०
काठमाडौ । के तपाईको कुर्सीमा बस्दा वा बेडमा बस्दा खुट्टा हल्लाएर बस्ने बानी छ ? सावधन ! यो गलत बानी हो । किनभने अनुसन्धानकार्ताले यो बानीलाई एक प्रकारको रोग भनेका छन् । यो बानी रेस्टलेस
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५१३:३५
काठमाडौँ । कतिपय मानिसमा नङ टोक्ने बानी रहेको हुन्छ । प्राय धेरै बालबालिकामा देखिने यस्तो समस्या सामान्य हो । तर पाको उमेरका व्यक्ति र युवायुवतीमा देखिने यो बानी खराब हो । यस्तो बानीको कारण विभिन्न
गाजा खान जानेमा औषधी, नजाने विष ! यस्ता छन् फाइदा र वेफाइदा(जान्नुस्)
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५१३:०३
काठमाडौं । वास्तवमा गाजा र भाङ भनेको एउटै प्रजातिको बोट हो । तर धेरै मानिसहरुले यसलाई फरक भन्दछन् । भाले प्रजातिको बोटलाई भाङ र पोथी प्रजातिको बोटलाई गाजा भनिन्छ । गाजामा भाङको तुलनामा टेट्राहाइड्रोकार्बनबिनोल (टीएचसी)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५१२:४२
काठमाडौँ । पर्याप्त मात्रामा पोषक तत्व पाइने केराले शरिरलाई निकै फाइदा दिन्छ । उर्जाबर्दक र बलबर्दकको लागि केरा खानु फाइदाजनक रहेको छ । आज हामी तपाईहरुलाई केरा कसरी खाने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । सबैभन्दा
बहुउपयोगी गुण भएको यो अचम्मको फुल जसले पार्छ यति धेरै रोगहरु निको
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५१२:०९
काठमाडौँ । औषधीय गुणले भरिपूर्ण भएको धेरै वनस्पतिहरु हाम्रो गाउँघर वरपर पाइन्छ । बहुउपयोगी औषधीय गुण बोकेको यस्ता जडीबुटीहरुलाई पहिचान गर्न नसक्दा हामी केमिकल युक्त औषधीको भरमा बस्न बाध्य हुने गर्छौ । यद्यपी तीनै जडीबुटीको
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५११:३१
काठमाडौँ । भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो । यद्यपी व्यक्तिको शरिर स्वस्थ रहेको छ भने उसले जस्तोसकै काम पनि गर्न सक्छ तर शरिरमा कुनै समस्या छ भने केही गर्न सक्दैन् ।त्यसकारण हरेक कुरालाई मध्यनजर गर्दै
उच्च रक्तचापको समस्या छ ? यसरी हटाउनुस् , बिना औषधी
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०८, २०७५११:२४
काठमाडौ । प्राय मानिसहरु अहिले भौतिकबादी भएर सुखसयल , ऐशआराम, रमाइलो जिन्दगी खोज्ने भएकाले सहरिया भएका छन् । त्यसैले यो सहरको चाप र विभिन्न समस्याहरुको कारण यहाँ खाने , सुत्ने , हिड्नेको टुंगो छैन् ।
दही खानुका यस्ता छन् ५ फाइदाहरु, कहिले र कसरी खाने ? खान नजाने बन्छ बिष
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ०७, २०७५१७:५८
काठमाडौ । दही खानु स्वास्थ्यका लागी फाइदाजनक हुन्छ । यसले हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई चुस्त राखी अनुहारमा सुन्दरता पनि ल्याउछ । तर यदि दही राम्रो हुन्छ भन्दै जहिले पायो त्यहीले खायो भने स्वास्यको लागी खतरा पनि
यी ६ रोगका कारण आउँछ डण्डिफोर ? यसरी हटाउनुस्
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ०७, २०७५१७:४९
काठमाडौ । प्राय मानिसहरुलाई डण्डिफोर अनुहारमा आउने गर्दछ । तर कसैकसैलाई शरिरका अन्य भागहरुमा पनि आउन सक्छ । डण्डिफोरले अधिकांस किशोर र वयस्कलाई सताउछ । आज हामी तपाईलाई यो कुन रोगको कारण कहाँ आउँछ भन्ने
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ०७, २०७५१७:२३
डोल्पा, ७ चैत । हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उपल्लो भोटमा ‘हेपाटाइटिस बी’ को बिकराल समस्या देखिएको छ । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको आयोजनामा सो गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने धो, तिन्जे, सिमेन्टलगायत स्थानमा गत वर्ष वैशाखमा गरिएको निःशुल्क